PEACEFUL PA: May 2011
စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်း၊ အတွေးအခေါ်ကောင်းများနဲ့ ယိုင်းပင်းကူညီကြသော နေ့ရက်များသို့ - To See Good Days!
လူဦးရေ နဲ့ ဘာသာတရား
Total 6,790,000,000 သန်းပေါင်း ၆၇၉၀
Density 118 people/mi2 တမိုင်ပတ်လည်မှာ ၁၁၈ ယောက်နှုန်း
Growth 1.14% per year တနှစ်တိုးပွါးနှုန်း ၁.၁၄%
Children 27.32% ကလေး ၂၇.၃၂%
Adult 65.12% လူကြီး ၆၅.၁၂%
Elderly 7.566% သက်ကြီးရွယ်အို ၇.၅၆၆%
Annual Births 131,000,000 နှစ်စဉ်ဖွါးနှုန်း ၁၃၁ သန်း
Annual Deaths 56,600,000 နှစ်စဉ်သေနှုန်း ၅၆.၆ သန်း
Christianity 33.32% ခရစ်ယာန် ၃၃.၃၂%
Islam 21.01% အစ္စလာမ် ၂၁.၀၁%
Hinduism 13.26% ဟိန္ဒူ ၁၃.၂၆%
Buddhism 5.84% ဗုဒ္ဓဘာသာ ၅.၈၄%
Sikhism 0.35% ဆစ်ခ် ၀.၃၅%
Independent Baptist Ministries
Christian Schools 889
Mission Agencies 323
Deaf Churches 99
Church Ministries 9,467
Camp Ministries 43
Military Ministries 15
Posted by Papa at 11:21 PM
Royal Wedding – William and Kate တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲ
Royal Wedding – William and Kate
By Salai Htein Win Ei
ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၁၁ သောကြာနေ့မှာ Great Britain ရဲ့ တော်ဝင် မင်္ဂလာပွဲကို T.V မှာ
ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
၁။ အင်္ဂလန်ရဲ့ ဘုရင်မကြီး - " သက်အဟာရ၊ သက်အဟာရ၊ ကောင်းကင်က ချပေးမူပါ၊ ကောင်းကင်က ချပေးမူပါ၊" ဆိုတဲ့ ဓမ္မသီချင်းကို ပရိတ်သတ်ဆိုကြရာမှာ ဘုရင်မကြီးက စာသားတော်တော် များများကိုအလွှတ်ဆိုတာတွေ့ လိုက်ရပါတယ်။ လောကီအရိုက်အရာကြီးပေမယ့် ဘုရားတရားနဲ့ သိပ်မဝေးတာ ကြည်နူးစရာပါ။
၂။ Anglican အသင်းတော်မှ ဦးဆောင်သူများက လိုတိုရှင်းပဲ ပြောကြလို့ အင်္ဂလ်ိပ်လူမျိုး ပီသတာတွေ့ရပါတယ်။ ခဏခဏကြားလိုက်ရတဲ့စကားက Spiritual Blessing ပါ။ ဝိညာဉ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ တချို့ လူမျိုးတွေနဲ့ မတူတဲ့ လူမျိုးစရိုက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါက ဘာသာရေးနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ လူမျိုးရဲ့ စရိုက်ပါ။
၃။ In Jesus Christ's name! လို့ ဆုတောင်းရာမှာ နာမတော်ကို ထည့်ဆုတောင်းတာ ခဏခဏတွေ့ရပါတယ်။ သိပ်ချိုပါတယ်။ ဝိညာဉ်ရေးမှာ နိုးထပါတယ်ဆိုတဲ့ America မှာတောင် နိုင်ငံတော်ပွဲတွေမှာ ဆုတောင်းရင် နာမတော်ပြောခွင့်မရှိချိန်မှာ တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ပွဲမှာ ထူးထူးခြားခြား တွေ့ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။
၄။ သစ္စာဆိုကြရာမှာတော့ သစ္စာဆိုနေတဲ့ သတို့သားကို သတို့သမီးက စေ့စေ့ကြည့်ပြီး ပြုံးနေတာကလည်း ကြည်နူးစရာပါ။ တကယ်ပြောနေတာနော် လို့ ပြောနေသလား မှတ်ရပါတယ်။ ဒါကို သတိထားမိသွားတဲ့ မင်းသားက ရှက်ပြုံး ပြုံးလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါက သစ္စာကိုတန်ဖိုးထားတာပါပဲ။
၅။ ပရိတ်သတ်ထဲက လူငယ်တချို့က နဖူးစည်းစာတန်း ကိုင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ "Kate – You have taken the King" " Kate - နင်၊ ဘုရင်ကြီးကို ရထားပြီ" လို့ ရေးထားပါတယ်။- ဘေးမှာ ပုံဆွဲထားတာက Chess - စစ်တုရင်ကစားရာမှာပါတဲ့ ရဲတိုက်ရုပ်ကလေးပါ။ မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ ဘယ်သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျမလဲ ဆိုတာ သူ့ဘဝရဲ့ နောက်ပိုင်းအတွက် ကံဆိုး၊ ကံကောင်းပါပဲ။ အခု Kate က ဘုရင်ကြီးကို ချိန်ထားပြီး၊ ရလိုက်ပြီ ဆိုပါတော့။ အောင်နိုင်သူ စစ်သူကြီး Kate ပါ။ Kate က စစ်သားရုပ်ကလေးကို မဟုတ်ပဲ၊ ဘုရင်ကြီးကို Check ခဲ့သူပါ။
၆။ သတို့သမီး အင်္ကျီက လုံလုံခြုံခြုံပါ။ တချို့သူတွေလို အပေါ်မပါ၊ ဗလာလုပ်မထားပါဘူး။ ဒါက တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ပြပါတယ်။ အနောက်တိုင်းမှာလည်း လုံလုံခြုံခြုံ ဝတ်ကြသူတွေရှိပါတယ်။
၇။ ပရိတ်သတ် ၆သိန်း- ၁၀မိနစ်လောက်ကလေး လက်ဝှေ့ရမ်းတာမြင်ရဖို့ အပင်ပန်းခံကြတဲ့ သံယောဇဉ်ကို တွေ့ရပါတယ်။ အုပ်စိုးသူကို အုပ်စိုးခံလူတွေက ဒီလောက်ချစ်ကြတာဟာ အဆန်းပါပဲ။ ပိုက်ဆံရှိရုံနဲ့ လူတွေချစ်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ အာဏာရှိရုံနဲ့ လည်း လူတွေမချစ်ပါဘူး။ ဒီ ကောင်းချီးက တမျိုးပါ။
ဒီမင်္ဂလာပွဲကြည့်ရင်း Glory! ဘုန်းအသရေဆိုတာ ဘာလဲ? Glorified! ဘုန်းထင်ရှားတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ? တွေးကြည့်စရာပါ။ ။
Posted by Papa at 10:47 PM
Peaceful Pa: Android ဖုန်းအတွက် သုံးရန်
ကယ်တင်ခြင်း Our Common Salvation. Sermon By Dr. Curtis Hutson
A Common Experience Pictures Our Common Salvation By Dr. Curtis Hutson ( preached at Franklin Road Baptist Church, Murfreesb...
A preacher who startedaChristian school for poor children in the year, 2000.
BREAD FOR BELIEVERS (20)
Charles Spurgeon (35)
Dr. Curtis Hutson (32)
Dr. Elmer Towns (1)
Dr. Hugh Pyle (1)
Dr. Jack Hyles (6)
Dr. John R. Rice (5)
Dr. Lee Roberson (1)
Dr. Peter L. Banfe (2)
George Muller (2)
Hymn History (7)
I.Q Test (1)
Paul Chappell (1)
Sermon Outlines (2)
Walter Wilson (1)
ကဗျာ၊ ၀ထ္တု (4)
BREAD FOR BELIEVERS 00 ယုံကြည်သူအတွက် အစာ
Bread For Believers ဆိုတဲ့ Dr. Curtis Hutson ရဲ့ စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။ တရားဟောချက် ၁၉ ပုဒ်ကို စုစည်းထားပြီး၊ ခရစ်ယာန်တယောက်အတွက် လမ်...
ဆင် . . Elephant -
ဆင် . . . . . `အချင်းလူပျင်း၊ ပရွက်ဆိတ်ထံသို့ သွား၍၊ သူ၏အပြုအမူတို့ကို ဆင်ခြင်သဖြင့် ပညာရှိစေလော့။ ပရွက်ဆိတ်သည် ဆရာမရှိ...
Christian Usages ခရစ်ယာန် အသုံးအနှုန်းများ
သမ္မာကျမ်းစာနဲ့ ယုံကြည်ချက်ဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန် အသုံးအနှုန်းတွေကို media တွေမှာ လွဲမှားစွာ သုံးနှုန်းတာတွေ တွေ့နေရပါတယ်။ စကားလုံးတွေကလည်း လူမှုရေးမှ...
သဘာဝတရားရဲ့ အံ့သြဘွယ်ရာများ Miracles in Nature by Dr. Walter Lewis Wilson
"ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်တို့ကို ဆင်ခြင်လော့။ ကောက်စေတော်မူသော အရာတို့ကို အဘယ်သို့ ဖြောင့်စေနိုင်သနည်း။" - ဒေသနာ ၇း ၁၃ မြေပဲစေ့တွေက အစ...
Father's Day - Sermon Outlines အဖေနေ့ မှတ်စု
U Bet Ei ၁၉၁၀ ခုနှစ်က အမေရိကန်ပြည်၊ Washington ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်၊ Spokane စပို့ကိန်းမြို့မှာ Senora Dodd စဲန်နိုရာ၊ ဒေါ့ဒ် ဆိုတဲ့ အမျိုး...
07. Giving – the Believer’s Responsibility ယုံကြည်သူ၏ တာဝန် - ပေးလှုခြင်း
Dr. Curtis Hutson ------------------------------------------------------------------------------- အခန်း ၇ -----------------------------...
11. WHY BELIEVERS HAVE TROUBLE ယုံကြည်သူတွေ ဒုက္ခ ရောက်ရခြင်း (BREAD FOR BELIEVERS)
Dr. Curtis Hutson ------------------------------------------------------------------------------------ အခန်း ၁၁ ------------------------...
ဆံပင် - Hair
ဆံပင် By Sherry Hutson Camperson ဆံပင်ဟာ နို့တိုက်သတ္တ၀ါတွေမှာ ပေါက်တဲ့ အမွေးအမှင်ပါ။ အမွေးနုကလေးကနေ ကြမ်းတမ်းစူးရှတဲ့ ဖြူဆူးအထ...
16. The Second Coming of Christ, the Believer’s Hope ယုံကြည်သူရဲ့ မြှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တဲ့ ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်း
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ အခန်း ၁...
ကွယ်လွန်သူ အထက်လွှတ်တော်အမတ် `ဂျော့၊ ဂရေဟမ်၊ ဗက်စ် Senator George Graham Vest က စကားမပြောတတ်တဲ့ ခွေးကလေးတကောင်အတွက် ချေပပေးတဲ့ စကားဟာ ...